Zivikele ngaso sonke isikhathi lapho uhweba i-FX | I-FXCC Blog
Aug 13 • Ukuthengiswa Kwama-Forex Izihloko, Amazwana eMakethe • Ukubuka kwe-1275 • Amazwana Off Zivikele ngaso sonke isikhathi lapho uhweba i-FX
Kunemidlalo ethile yeqembu lapho ukuzivikela kubaluleke njengokuhlasela, noma “icala” njengoba abazala bethu baseMelika bathanda ukuyibiza. Ebholeni besizoshiyeka sijabule kakhulu futhi singekho umoya uma iBarcelona neManchester City bedlala umdlalo we-6-5 ngokugcizelelwa kokuhlaselwa nangaphandle. Kepha abahlanzayo phakathi kwethu bazovuma umdlalo phakathi kweReal Madrid neJuventus ngesikweletu sokuzivikela esaphela nge-1-0.
Ebhokisaneni unompempe uvame ukusebenzisa igama elithi “zivikele ngaso sonke isikhathi” njengoba ehambisa imiyalo yakhe yokugcina kubabhokisi ababili, ngaphambi kokuthi babuyele ekhoneni labo ukuze kufakwe izihlangu zabo ze-gum. Okufanayo nokuthi abahlinzayo bayoyijabulela kanjani indlela yokuzivikela ebabazekayo ebholeni, ukubuka abadlali abasezingeni eliphezulu abanamakhono okushaywa kodwa bangashayi, ngoba bagxila esicini sokuvikela umdlalo wabo, kungabajabulisa ukubukela.
Kuyathakazelisa ukuthi abaqhudelani be-e-Sport manje sebebhekwa njengabasubathi, laba badlali abasebasha ikakhulukazi, abadlala imidlalo eminingi kubabukeli abakhulu ku-inthanethi nasezinkundleni zemidlalo sebeqalile ukubhekisisa: ukudla kwabo, impilo enhle, izindlela zokuzivocavoca nendlela yabo yokudlala. . Akukho okushiywe inhlanhla, bazinikeza ithuba elihle kakhulu lokuthola imiklomelo emikhulu eseyatholakala. Baphinde bathuthukise amasu okudlala ngawo lapho bagxila ekuvikelweni kakhulu nasekuhlaseleni.
Ngenkathi ukuhweba kwe-forex akufanele kubhekwe njengomdlalo wokuncintisana kakhulu njenge-e-ezemidlalo kunezinto ezithile ezifanayo futhi ngezindlela eziningi ukuhweba i-FX kuwumsebenzi wokuncintisana. Akungabazeki ukuthi udinga ukuba nokukwazi ukukwenza, ukucabanga okuhle kanye nokuncintisana ukuze uphumelele. Kufanele uthuthukise ubutha obulawulwayo, imakethe ayinikezi ukuthi uthathe. Kufanele futhi ufunde ukuthi ungazivikela kanjani ngaso sonke isikhathi ukuze uqinisekise ukuthi uvikelekile ekushayweni kwemakethe.
Impumelelo yokuhweba nge-Forex ngeke ifike kungazelelwe, kufanele kusetshenzwe kuyo, uzodinga amazinga aphakeme wokuqina ukuze uthuthuke futhi uzuze inzuzo yebhange. Udinga ukuthuthukisa isu lokuhlaselwa ngenkathi unaka kakhulu ukuzivikela, futhi udinga ukufunda ngokushesha ukuvikela imali ku-akhawunti yakho yokuhweba ngaso sonke isikhathi.
Umlingisi osezingeni eliphakeme uqaphela ngokugcwele ukuthi bazoyishaya imincintiswano emiqhudelwaneni yabo, kepha bahlala belandisa ubungozi abazobathatha lapho behlela ukubanga ukushaya kwabo. Ngokufanayo, umhwebi onolwazi we-FX uyazi ukuthi mhlawumbe ngaphandle kwe-10 kuzoba ngabaphumelele i-6 kuphela, enye yezici ezibalulekile zempumelelo ukuqinisekisa ukuthi imali ebhengezwe ngabawinile inkulu kakhulu kunemali elahlekelwe ngabalahlekeli bakho, lo mthetho olula wokuqinisekisa kuzohlale kunenzuzo. Ngakho-ke ungazivikela kanjani ngaso sonke isikhathi lapho uhweba ngamakethe ngenkuthalo?
Cabanga ngaso sonke isikhathi ukuhweba ngalezi zindlela kunokuba usebenzise izindlela zokuhweba eziphikisayo
Kungase kufundwe njengendlela elula futhi kulula. Uma ungumthengisi wezinsuku lapho-ke akunzima kakhulu ukukhomba ukuthi ngabe umdlalo wemihla ngemihla uyadlalwa. Imakethe yezokuphepha ingahle ibe isusayo noma ihamba phambili, ngamanani alula intengo ingahle inyukele phezulu, phansi noma eceleni kwendlela. Uma intengo i-oscillating ezungeza iphoyinti le-pivot yansuku zonke kungenzeka ihamba emaceleni, uma intengo ithengisa ngaphezulu kweleveli yokuqala yokumelana, i-R1, khona-ke kungenzeka kakhulu ukuthi iqhubeke nokuhweba kumkhuba wamanje we-bullish, noma ukuthuthukisa inkambiso entsha. Ukuhweba ngenhla yendlela evamile kufanele kunciphise amathuba akho okuthola ukulahleka.
Vikela imali yakho enkulu ngezitobha, imingcele yokulahleka kwansuku zonke kanye nokudonsa okuqinile
Ngawo wonke umsebenzi wokuhweba owenzayo kufanele ube nohlelo lokuphuma ngokuma nokuma kokuthola inzuzo noma umkhawulo we-oda. Kufanele ubeke engcupheni inani elincane lemali ye-akhawunti yakho ngokuhweba ngakunye. Kufanele usethe umkhawulo wokulahlekelwa wansuku zonke ofanele ngaphambi kokuvuma ukuthi namuhla isu lakho alihambisani nokuziphatha kwemakethe. Kufanele futhi usethe izinga lokudonsela phansi uma uma wephulwe kuzokukhuthaza ukuthi ubuyela emuva ebhodini lokudweba uphinde ubuyekeze isu lakho lamanje, noma udale indlela necebo elisha.
« Ungayisebenzisa kanjani isu lezinhlaka eziningi lapho uhweba i-FX Ukwesaba ngezindlela zalo ezahlukahlukene kungakuthinta kanjani ukuhweba kwakho »